Ho an’ny fitsaràna Eorôpeàna dia tsy manantsiny amin’ny resaka fanalàna baràka nanenjehana azy tamin’ny 2010 ilay Makedôniàna mpanao gazety · Global Voices teny Malagasy
Notakiany ny rariny noho ny fihantsiana herisetra natao an'ireo mpanao hetsipanoherana
Voadika ny 15 Novambra 2020 5:53 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, English, Français, Español, Ελληνικά, Română , English
Nikola Gelevski. Sary nahazoana alàlana tamin'i Nebojša Gelevski
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana, dia mankany amina lahatsoratra amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra ato anatin'ity lahatsoratra ity.]
Tamin'ny Septambra 2020, nambaran'ny tranonkala Okno.mk fa namoaka didy ny Fitsaràna Eorôpeàna momba ny Zon'Olombelona (CEDH) nanasazy ny Repoblikan'i Makedônia handoa onitra mitentina 3.000 euros amin'i Nikola Gelevski noho ny nanitsakitsahany ny fahalalahany maneho hevitra.
Ilay didy fanapahana navoakan'ny Fitsaràna tao Strasbourg dia momba ilay fitoriana napetrak'ilay toniandahatsoratra fahiny tao amin'ny gazety Večer sy ny fantsompahitalavitra Sitel TV, Dragan Pavlović, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Latas, nanenjehany an'ilay mpanao gazety noho ny lahatsorany nitondra lohateny hoe « The Megaphones from the Führer’s alley » [mk] (adika tsotsotra hoe: ilay fanamafisampeo teo an-dalantsaran'ny Führer), navoakan'ny gazety mpiseho isanandro Utrinski vesnik tamin'ny 31 Martsa 2009.
Ny didon'ny governemanta amin'ireo medias teo anelanelan'ny 2007 sy 2017
Navoitran'ireo fihainoana resaka an-telefaona naseho ho fanta-bahoaka tamin'ny 2015 fa ireo tomponandraikitra ambony tao amin'ny antoko teo amin'ny fitondràna, ny VMRO-DPMNE [fr], dia nanindry mivantana ny matoandahatsoratra isanandro avoakan'ireo media notantanan'i Dragan Pavlović/Latas.
Tao anatin'ny iray tamin'ireny resaka ireny, nifanaovany tamin'ny minisitry ny kolontsaina tamin'izany fotoana izany, i Latas izy tenany mihitsy no nanohitra tsy hanaovana ny fantsom-pahitalavitrany Sitel TV ho toy ny « fimailo fiarovana ho an'ny fampielezankevitra ataon'ny VMRO-DPMNE ». Ao anaty resaka iray hafa indray, ny lehiben'ny sampandraharaha miafina, Sašo Mijalkov, mampahatsiahy fa ny governemanta anie ka mandrotsaka 2 tapitrisa euros isantaona ho an'ireo medià eo ambany fitantanany. Novalian'i Latas fa mendrika ho an'ireto farany ny hahazo izany vola izany satria izy ireo “nanome” ireo tolotra ho fampielezankevitra notakiana taminy, tsy tahaka ireo medià hafa tsy dia nahomby loatra.
Araka ny angondrakitra navoakan'ny governemanta vaovao napetraky ny antoko sôsialy-demaokraty SDSM [fr] tamin'ny May 2017, ny fitondran'ny VMRO-DPMNE dia nandrotsaka vola 10,2 tapitrisa euros avy amin'ny volan'ireo mpandoa hetra, ho an'ny Sitel TV [mk] teo anelanelan'ny 2010 sy 2017.
Navoitran'ilay lahatsoratr'ingahy Gelevski ny anjara raisin'ireo olomalazan'ny tontolon'ny media, ka isan'ireny i Latas, izay nihaika sy nanamarina ilay herisetra nokarakarain'y antoko teo amin'ny fitondràna tamin'izany fotoana izany namelezana ireo mpianatra nanao hetsipanoherana teo amin'ny kianja fototra tao Skopje tamin'ny 28 Martsa 2009.
Tao anatin'ilay tsanganandahatsorany, nanaovany fampitahana tamin'ny fiakaran'ny nazisma tao Alemaina tany amin'ny andian-taona 1930 tany ho any, indrindra fa ny firosoana amina fampielezankevitra sy fampiasàna jiolahimboto mba hidaroka ireo mpanohitra ara-politika. Araka izany dia nampitandrina izy hoe mikisaka mankany amin'ny fanaovana jadona ny firenena, izay raha ny heviny, dia mety hiteraka ady an-trano. Vitan'ingahy Gelevski ny nitaky fanazavàna tamin'ireo apparatchiks tao anatin'ny antoko teo amin'ny fitondràna, Aleksandar Bičikliski sy ilay mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra, Janko Ilkovski. Olona akaikin'ny fitondràna, ary isan'ireo manodidina ny praiminisitra tamin'izany fotoana izany, Nikola Gruevski [fr] sy ilay zanak'olona mpiray tampo aminy, lehiben'ny sampandraharaha miafina tamin'izany fotoana izany, Sašo Mijalkov, i Latas araka izany no iray tamin'ireo olona ambony tò teny indrindra tamin'ireo voatanisa ireo.
Tamin'ny 2010, nahazo rariny i Latas taorian'ny dingam-pitsaràna naharitra taona iray momba ilay fanalàna baràka nitoriany ilay mpanao gazety Nikola Gelevski. Nandraman'ingahy Gelevski ny nanohitra ilay didin'ny mpitsara Ljubinka Baševska [mk] ary dia nandrafitra izy fampakarana ho alefa amin'ireo ambaratongam-pitsarana ambony rehetra teo amin'ny firenena, indrindra fa ny Fitsaràna araka ny Lalampanorenana, tamin'ny 2012 [mk], fa tsy nisy na iray aza nanome rariny azy.
Tamin'izany fotoana izany, ny fanalàna baraka dia sazian'ny lalàna famaizana no sady noraisina ho toy ny heloka bevava. Nesorina tsy ho heloka izy io tamin'ny 2012 ka niala tsy ho anatin'ny ady heloka bevava fa lasa anaty ady madio, izay midika fa tsy voatery intsony hiditra am-ponja izay olona voaheloka ho nanala baràka. Na izany aza anefa ny fanalàna baraka dia mety hahavoasazy handoa onitra lafobe mba ho fandresena lahatra tsy hanao izany.
Taorian'ny fitsaràna fandravàna didy napetraka teny amin'ireo tribonaly tao an-toerana, nampiditra fitoriana teny amin'ny CEDH ingahy Gelevski tamin'ny Desambra 2012. Efa ho valo taona katroka aty aoriana, nanambara ilay Fitsaràna fa « neken'ny governemanta ny fisian'ny fitsabahany tamin'ny tsy fanajàna ny fahalalahana maneho hevitra nananan'ny mpitory».
Tao anatin'ny antony namoahany ilay didy navoaka, nanamafy ny CEDH fa « ny olona rehetra, indrindra fa ny mpanao gazety, izay mandray anjara amin'ny adihevitra imasom-bahoaka mahakasika ny tombontsoan'ny be sy ny maro dia mahazo alàlana hiditra amina haavo iray voafaritra amin'ny fihantsiana na fanatavezan-dresaka ». Nambaran'ilay Fitsaràna ihany koa fa « ny fanamelohana azo teny amin'ny ady heloka dia tsy isalasalàna fa nisy fiantraika manangoly ho an'ny adihevitra pôlitika eo amin'ireo matianin'ny tontolon'ny medià momba ireo olana manandanja sy maika ».
Tao anaty fampitambaovao iray navoakan'ny vavahadin-tserasera ara-kolontsaina Okno.mk, nambaran'ingahy Gelevski [mk] fa :
Mazava loatra fa afapo tamin'ilay didy navoakan'ny Fitsarana Eorôpeàna momba ny Zon'Olombelona aho. Mahafaly ahy ny dika midadasika be ananan'io fanapahankevitra io ho an'ny fiarahamonina, mihoatra lavitra noho ny fahafahampoko manokana.
Io didy io dia mitondra porofo fanampiny amin'ny natiora manohitra ny demaokrasia nananan'ny fitondràna Nikola Guevski izay nifehy an'i Makedônia nandritra ny 11 taona : nanomboka tamin'ny asa fanorenana tanàna ka hatramin'ny kolontsaina, ny rafi-pitsaràna hatrany amin'ny fampahalalambaovao. Tsy nitondra irery izy, fa niaraka tamin'ny andian-tafika azy manokana nisy ireo mpanara-dia mpanara-drenirano. Tsy izy irery araka izany no tomponandraikitra tamin'ireo taona 11 nahatsiravina nahatonga antsika nitontongana, amin'ny maha-fiarahamonina antsika, tamin'ny sehatra rehetra.
Manandanja ho an'ireo Makedôniàna mpanao gazety sy mpikirakira vaovao io fanapahankevitra io, ary ho an'ny olona rehetra miseho vahoaka amin'ny ankapobeny, satria manosika azy ireo hanana fotokevitra, hitazona ny teniny, hijoro ho sahy sy hanana faharetana.
Tokony ho lohahevitra fandinika ho an'ny rafi-pitsaràna makedôniàna ilay fanapahankevitra, izay rafitra nanompo tsy nisy fepetra fitondràna iray faran'izay mpamotika sy nampididoza nandritra ny taompolo iray manontolo.
Indrisy, nandritra ny taona telo farany teo, tsy afa-bela velively tamin'ny tetikady sy fomba fanao mamohehatra ataon'ny Gruevisme isika. Marina manokana io ho an'ny rafi-pitsaràna sy ny fampahalalambaovao. Vokany, raha rasina amin'io fomba fijery io, ilay fanapahankevitr'i Strasbourg, na ohatra aza izy valo taona aty aoriana vao nihetsika, dia mety mba ho fanairana kely ho fanombohana miala amin'ny làlana diso nizoran'ny firenenay, ary tsy hoe fotsiny amin'ny sehatry ny zon'olombelona.
Na dia iray tamin'ireo fampanantenana goavana nataon'ny governemanta nisolo toerana ny fitondran'i Gruevski tamin'ny 2017 aza, nandritra ny fampielezankeviny tamin'ny fifidianana, ny hanavaozana ny rafi-pitsaràna, dia nambaran'ireto vaovao ho antony tsy mbola nahavitàna izany ny tsy fahampian'ny tohana avy amin'ny mpanohitra mba hitondràna fanavozana lalina ifotony an'ireo olona ao anatin'ny fitantanana ny fitsaràna ka mety hahafahana manara-maso ireo mpitsara sy ny mpampanoa lalàna. Marobe ireo mpanamora zavatra avy amin'ny fitondràna, izay niditra tamin'ilay nantsoin'ny Fiombonambe Eorôpeàna tamin'ny 2016 hoe « fanaovana takalonaina ny Fanjakàna », no mbola mitazona toerana mpanapa-kevitra hatramin'izao any anatin'ireo andrim-panjakàna maro. Ilay ramatoa mpitsara Ljubinka Baševska, izay namoaka ny didy nanameloka an'ingahy Gelevski, dia mbola mpitsara ihany ao anivon'ny Fitsarana Ady Heloka ao Skopje [mk].
Ny tatitra iray navoakan'ny Kaomisiôna Eorôpeàna [pdf] tamin'ny 2020 momba an'i Makedônia Avaratra dia manaiky fa nisy fivoarana vitsivitsy vita tamin'io sehatra io, ary ampiany fa « mbola misy hatrany ireo ezaka ilaina ho fiantohana ny fametrahana mitohy ny drafitr'asa manaraka ny zavamisy momba ny tetikadim-panavaozana ny rafi-pitsaràna », raha ny tatitra isaky ny firenena avy amin'ny departemanta amerikàna mahakasika ireo fomba fanao amin'ny resaka zon'olombelona indray milaza fa « ny fahalevoantenam-pitsaràna voafepetra, ny fampidirana resaka pôlitika anatin'ny rantsana mpanaramaso ny fitsaràna ary ny famatsiana vola tsy araka ny tokony ho izy atao amin'ny rafi-pitsaràna dia nitohy nanelingelina ny fiasa sy ny fahombiazan'ireo tribonaly ».